हुने हार दैव नटार ! अलबिदा मामा !! : RajdhaniDaily.com
HomeUncategorizedहुने हार दैव नटार ! अलबिदा मामा !!
मदनमान सिंह बस्नेत, काठमाण्डौको प्रसिद्ध दक्षिणकाली क्षेत्र नजिक फर्पिङ सत्तिखेलमा हुर्के बढेर सामाजिक अभियन्ताका रुपमा परिचित नाम हो । २०१० बैशाख १३ गते जन्मेका मदन पिता ललितमान सिंह बस्नेत र माता चन्द्रकुमारी बस्नेतका चार सन्तान मध्येका माहिलो हुन् । एकाघरका आफ्ना एक दाजु, एक भाइ र एक बहिनीलाई छाडेर सधैंका लागि बिदा हुने ललित र चन्द्रकुमारीका पहिलो सन्तान भए । २०७८ जेठ १५ गते कोरोना भाइरससँगको लामो संघर्ष हारेर उनी घर परिवारका सदस्य, दौंतरी र आफन्तलाई सधैंका लागि छाडेर अनन्त यात्रामा निस्के । शायद भगवानलाई पनि समाजका राम्रा मानिस नै प्रिय हुन्छन् । मदनका हकमा पनि यही लागू भयो ।
अब मदनका दौतरीहरु उनको सानैदेखिको भद्र, शालीन एवं कम बोल्ने तथा एकछिन काम नगरी नबस्ने स्वभाव सम्झदै प्रशंसा गर्दैछन् । उनको प्रशंसा नहोस् पनि किन ? गाउँमा अरुणोदय प्राथमिक विद्यालय मात्र थियो । त्यसभन्दा माथि पढ्न गाउँमा कुनै विकल्प थिएन । यो विद्यालयलाई माध्यमिक स्तरमा लैजान उनले निर्वाह गरेको भूमिका उनका समकालीनका लागि बिर्सन नसक्ने प्रेरणा नै बनेको थियो । शुरुमा उनी २०२८ सालदेखि त्यही प्राथमिक विद्यालयमा चार वर्षसम्म निरन्तर स्वयंसेवकको रुपमा कार्यरत रहे र २०३३ सालदेखि लेखापालका रुपमा काम गर्न थाले र लामो समयसम्म सेवा दिइरहे ।
खेलकुदप्रति मदनको असाध्य रुची थियो । विद्यालयमा खेलकुदको उचित प्रवन्ध नभएकोमा खिन्न मदनले गाउँघरका दाजुभाइ, दिदीबहिनीलाई प्रेरित गर्दै भिरालो डोलवारी सम्याएर खेल मैदान बनाएका थिए । राजधानीको नजिक भएर पनि नागरिक चेतना कम नै रहेको त्यो समयमा मदनले युवा जोशका साथ २०३६ सालमा नर्वदेश्वरमा ज्ञानज्योति पुस्तकालय स्थापना गराए । यस अतिरिक्त सामाजिक काममा पनि उनको निकै रुची थियो । स्थानीय स्रोतहरुको संरक्षण गर्दै बासुकीकुण्ड बनाउनमा मदनको सक्रियता उत्साहप्रद थियो । अहिले पनि फर्पिङ सतिखेलका नागरिक यही बासुकीकुण्डको स्वच्छ, सफा र मूलको पानी पिउनमा आनन्द मान्छन् ।
मदनले जीवनका महत्वपूर्ण समय गाउँमै बिताए र गाउँघरकै सेवामा आफूलाई समर्पण गरे । उमेरको उत्तराद्र्धमा उनले पनि शहरको जीवन रोजे र २०७६ सालमा फर्पिङ छाडेर बानेश्वरमा बसोवास शुरु गरे । तर गाउँघर, दाजुभाइप्रतिको मोहमा उनले कुनै कमी आउन दिएनन् । उनी बेलाबखत गाउँ आइरहन्थे र छरछिमेकी, दाजुभाइ र छरछिमेकको बारेमा चासो राखिरहन्थे । एउटा नेपाली उखान छ – गाई भए गोरस, भाइ भए भरोस । शायद यसमा उनको बढी नै बिश्वास थियो ।
उनी बेलाबखत गाउँ आइरहन्थे र छरछिमेकी, दाजुभाइ र छरछिमेकको बारेमा चासो राखिरहन्थे । एउटा नेपाली उखान छ– गाई भए गोरस, भाइ भए भरोस ।
यही उखानलाई मदनले काठमाण्डौमा बस्ने दाजु भाइका हकमा पनि लागू गर्दै थिए । दाजु भाइहरु बसेकै ठाउँ लाजिम्पाटमा बस्ने योजनाका साथ उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम इच्छाका रुपमा मनको महल बनाउन थालेका थिए । त्यो ‘महल’ बन्दै गर्दा पिताजी ललितमानले देहत्याग गर्नु भयो । घरका सबै सजावट सकिए पनि उनी घर सर्ने समयको पखाईमा थिए । तर कालले उनलाई पर्खन तयार भएन । उनी आफ्ना आकांक्षालाई अधूरै छाडेर लुसुक्क कालको पछि लागे । वास्तवमा पिताजीको बर्खीभर घर नसर्ने र शान्ति सेनामा कंगोमा रहेको छोरा फर्किएपछि लाजिम्पाटको घरमा सर्ने उनको सोच थियो । छोरा स्वदेश फर्केपछि बाबुछोरा मिलेर घर सजाउन मदनले त पाएनन् नै, छोरा अजितमान पनि घर सजाउनेमा एक्लै परे ।
घर परिवारमा पत्नी र बुहारीले कोरोनालाई जित्नसके, तर मदनआफैं भने हारे । उनको अस्पताल बसाइको लामो समय रेखदेख गर्दै गर्दा धर्मपत्नी लक्ष्मी स्वयंलाई कोरोनाले समात्यो । घरमा दुई चिचिला सन्तानको स्याहार सम्भारमा लागेकी बुहारी प्रिया पनि कोरोनाले इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा पुगिन् । यस्तो बेला आफन्त र छिमेकीले हुनेसम्मको सहयोग गरेकै हुन् । आमा र भाइबुहारी दुबै आफैं पीडित भएपछि पोखरामा रहेकी जेठी छोरी अर्चनाले काठमाण्डौ आएर सबै रेखदेख गरिन् । मेजर कञ्चना सिंहले पनि सैनिक अस्पताल छाउनीका सम्पूर्ण चिकित्सक टोलीलाई हरेक पल मदनको स्वास्थ्यको ख्याल राख्न प्रेरित गरिरहिन् । मदनको जीवन बचाउने प्रयासमा कान्छी छोरी अञ्जना र ज्वाई अमृत केसीले गरेका हरेक अथक प्रयास पनि कोरोना सामु निरर्थक बन्यो । जेठ १५ गते मदनलाई कसैले रोक्न सकेन, उनी एक्लै महायात्रामा प्रस्थान गरे । न मलामी, न दागवत्ती – सयौं आफन्त कमाएका मदनलाई थाहा भएन, उनको अन्तिम बिदाइमा चाहेर पनि धेरै आफन्त आउन पाएनन् ।
दाह संस्कारको जिम्मा लिएको सैनिक टोलीले हिन्दू संस्कारको सामान्य कर्म त पूरा गरिदियो । तर कंगोमा रहेका छोरा उतै रोकिए । पिताजीको क्रियाकर्ममा समेत उनी सहभागी हुन पाएनन् । न त उनले बुवाको अनुहार अन्तिम पटक हेर्न नै पाए । मदनका भाइ रमेशमानसिंह बस्नेतले दाजुको काजक्रिया उतारेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे । तर फेरि कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि पत्नी लक्ष्मीले काजक्रिया छाडेर एकान्तवास शुरु गर्नु प-यो । पतिवियोगको पीडा भोगिरहेका बेला एकान्तवास बस्नु परेकी पत्नी लक्ष्मीको अवस्था कस्तो रह्यो होला ? यो जो कोहीले अनुमान पनि गर्न सक्दैन । शत्रुले पनि भोग्नु नपरोस् भन्ने खालको पीडा पत्नी लक्ष्मीले आफैं भोग्नु प-यो । हुने हार, दैव नटार । मदनको अन्तिम जीवन यस्तै भयो ।
अन्त्यमा मदनका दौंतरी केदारनाथ आचार्यले सम्झना स्वरुप कोर्नु भएको यो कविताः
कोभिडे दुष्टले आज हाम्रो साथी चुँडिलग्यो
प्यारो मदन सम्झेर बस्न वाध्य गराइयो ।
गर्न पाउ तिमी प्यारा स्वर्गमाझ ढलिमली
बुझेर दैवको लीला दिन्छु हार्दिक श्रध्दाञ्जली ।।
(लेखिका स्वर्गीय मदनमानसिंह बस्नेतकी भाञ्जी हुन् ।)
उत्तर काेरियाका गरिब भाेक मेटन धनीका छाेरा छाेरी अपहरण गर्दै पैसा माग्दै
प्योङयाङ । भोकमरीको चपेटामा परेको उत्तर कोरियामा बालबालिका अपहरण गरी ठूलो मात्रामा फिरौती रकम लिने गरेका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । जीविकोपार्जनका लागि गरिबले...
राजीनामा दिएर अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीले देस छाडे